Umshini generator YZU
I-vacuum generator iyinto entsha, ephumelelayo, ehlanzekile, eyongayo nencane yomshini osebenzisa umthombo omuhle womoya wokufaka ingcindezi ukukhiqiza ingcindezi engemihle, okwenza kube lula kakhulu futhi kube lula ukuthola ingcindezi engemihle lapho kunomoya ocindezelweyo noma lapho kukhona ukucindezela okuhle nokubi kukhona kudingeka ohlelweni lwe-pneumatic. Ama-vacuum generator asetshenziswa kakhulu ku-automation yezimboni, njengemishini, i-elekthronikhi, ukupakisha, ukuphrinta, amapulasitiki namarobhothi.
Izihlungi zomshini ziqoqa ukungcola (ikakhulukazi uthuli) okukhishwe emkhathini ukuvimbela ukungcoliswa kohlelo futhi kusetshenziswa phakathi kwenkomishi yokudonsa nejeneretha yomshini (noma i-vacuum valve). Ama-mufflers azofakwa echwebeni lokukhipha i-vacuum generator, port port (noma i-exhaust port) ye-vacuum valve kanye ne-exhaust port of vacuum pump.
Umshini chuck YZP
Umshini wokumunca, owaziwa nangokuthi i-vacuum spreader, ungomunye wemishini yokusebenza ye-vacuum. Ngokuvamile, ukusetshenziswa kwemikhiqizo yokudonsa inkomishi yokubamba inkomishi yindlela eshibhe kunazo zonke.I-Vacuum suckers yizinhlobo ezahlukahlukene. Ama-suckers enjoloba angaqhutshwa ezingeni lokushisa eliphakeme. Amaswidi we-Silicone akulungele kakhulu ukubamba imikhiqizo enendawo engamakhanda.Izinkomishi zokukhishwa ezenziwe nge-polyurethane zihlala ziqinile. Ngaphezu kwalokho, ekukhiqizweni kwangempela, uma inkomishi yokudonsa idinga ukumelana nowoyela, kungabhekwa njengokusebenzisa izinto ezifana ne-polyurethane, i-nitrile butadiene rubber, noma ama-polymers aqukethe i-vinyl ukwenza inkomishi yokudonsa. ukugwema ubuso bomkhiqizo kuklwebhiwe, ukukhetha okuhle kwenziwa ngerabha le-nitrile noma i-silicone irabha enenkinga yokudonsa inkomishi yenziwe ngenjoloba ye-nitrile, inamandla amakhulu wokudwengula, ngakho-ke isetshenziswa kakhulu emishini ehlukahlukene yokudonsa.
Ukulawulwa kwe-pneumatic ezingxenyeni ezibalulekile, izingxenye zendlela yokulawula indlela eyodwa. Imvamisa kumisiwe phakathi kwesilinda ne-valve ehlehlisayo, ukuze umoya oku-cylinder ungadluli ku-valve ehlehlisayo ne-valve ekhishwe ngqo.
Ipulasitiki yokudonsa njengoba igama liphakamisa ukuthi uhlobo lokuhudula.Ngokuya kwesakhiwo kungahlukaniswa ngebhuloho lokudonsa ipulasitiki kanye nocingo oluvaliwe ngokuphelele; Ngokuya ngemodeli, ingahlukaniswa ibe iketanga elincane, iketango elijwayelekile futhi elikhulu Ngokuya nge-coefficient yomsindo ingahlukaniswa yaba iketango elijwayelekile lokuhudula kanye nochungechunge lokuhudula buthule; Ngokuya ngefomu lingahlukaniswa libe iketango elijwayelekile lokuhudula, iketanga lokuhudula ngokufana, uhlobo lwe-S lokuhudula; Ngokusho kwezinto zokusetshenziswa kuhlukaniswe kwaba ipulasitiki yokuqala yeplastiki kanye nepulasitiki eyenziwe kabusha, njll.
Isilinda esine-Pressurized sibizwa nangokuthi i-gas-liquid pressurized cylinder
Ingcindezi yengcindezi ihlanganiswe nezinzuzo zesilinda nesilinda nokwenza ngcono ukwakheka, uwoyela wokubacindezela nokuhlukaniswa okuqinile, umoya ocindezelweyo koxhumana nabo besilinda se-piston ngemuva kokuqala komsebenzi, isivinini sokuhamba, ukuzinza, nedivayisi yomoya yokudlulisa , ukulungiswa kokukhishwa okulula, kungafinyelela amandla aphakeme wokucindezela u-hydraulic ezimweni ezifanayo, ukusetshenziswa kwamandla okuphansi, ukufika okuthe xaxa akulimazi isikhunta, kulula ukufaka nokufaka isilinda esikhethekile sengcindezi kungaba ngama-degree angama-360 kunoma iyiphi i-Angle, isikhala okuhlala kuso ukungasebenzi kahle okuncane, okuphansi kokushisa, impilo ende, umsindo ophansi, nezinye izici eziyinhloko.